Krakow kugamuchira 2022 International Congress uye Convention Association chiitiko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Poland Breaking Nhau » Krakow kugamuchira 2022 International Congress uye Convention Association chiitiko
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Poland Breaking Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo 2022 ICCA Congress inoenderanawo neyegumi yegumi yekuve nhengo yeKraków muInternational Congress uye Convention Association (ICCA).
61st ICCA Congress musi wa 13-16 Mbudzi 2022, ichatora nhengo dzayo kuguta riri mukati memwoyo weEurope inova zvakare nzvimbo yepasi rose tsika, hunyanzvi nesainzi.
Kraków, Poland inzvimbo yekuongorora mazana emakore enhoroondo pamwe chete nezvishongo zvekuvakwa kwazvino.
Kraków anoratidza pachena kuzvipira kune maviri eICCA yakakosha tsika: kushanda pamwechete uye kukumbundira hunyanzvi.
Yekutanga International Congress uye Kokorodzano Association (ICCA) Congress musi wa 13-16 Mbudzi 2022, ichatora nhengo dzayo kuenda kuguta riri pamoyo peEurope iri zvakare nzvimbo yepasi rose tsika, hunyanzvi nesainzi. Kraków, Poland inzvimbo yekuongorora mazana emakore enhoroondo pamwe chete nezvishongo zvekuvakwa kwazvino. Gore rega rega iro rinowanikwa nyore nyore guta rinogamuchira zviitiko zvakakosha zvetsika nedzidzo, pamwe nemisangano yebhizinesi.
The 2022 ICCA Congress inoenderanawo neyegumi yegumi ye CracowNhengo muInternational Congress uye Convention Association (ICCA). Kubatana kwave kwakakosha mukuenderera mberi kwekukura nekubudirira kwaKraków mukati memakore gumi apfuura.
Semuenzaniso, iyo KRAKÓW NETWORK inounza pamwechete vanhu vangangoita mazana mana, inomiririra angangoita mazana e400 uye inoumbwa nemapoka mashanu ezvidzidzo. Zvichakadaro, Kraków future Lab rakapihwa basa rekuunza misangano padyo nezviitiko zvitsva matekinoroji. Masimba ekubatana akasimba ari kuvakwa kwete kwete chete munharaunda asiwo nenyika, kusanganisira nePoland Convention Bureau yePoland Tourism Organisation, gumi nematanhatu Mahofisi eCongress, masangano emabhizimusi emunyika, nzvimbo dzekudyidzana, uye kutora chikamu muCongress Ambassador Programme. Kraków inhengo yeEuropean Cities Marketing.
"Cracow inoratidza pachena kuzvipira kune maviri eICCA yakakosha tsika: kushanda pamwechete uye kukumbundira hunyanzvi. Neichi chikonzero, iro guta raive sarudzo iri pachena yegore rinouya remusangano. 2022 ICCA Congress vamiriri vanogona kutarisira musangano usina musono unosanganisa nzvimbo yepasi rose nesangano rezvematongerwo enyika, "akadaro CEO weICCA Senthil Gopinath.
ICCA Vamiriri veCongress vachasangana ku ICE Kraków Congress Center, iro bhizinesi uye tsika mureza weguta. Iri pakati nepakati, yakabata zviitiko zvakawanda zvepasirese uye zvakasiyana senge chikamu chemakumi mana nesere cheUNESCO World Committee 41th World Congress yeOWHC uye musangano wepagore weWorld Eyes Economy.
“Kongiresi yeICCA ndechimwe chezviitiko zvakakosha muindasitiri yemisangano pasi rose. Gore rega rega zvinounza pamwe vangangoita chiuru chevanyanzvi vane ruzivo mukuronga misangano yepasi rese uye makongiresi: kwavanoenda, nzvimbo, maPCO nemasangano. Poland ichaitambira kekutanga, izvo zvinoratidzira izvozvi, yatokura nzvimbo yeindasitiri yedu, uye kune rumwe rutivi inogadzira mikana mikuru yekuenderera mberi kwayo "inosimbisa Meya weKraków Jacek Majchrowski.
“Sezvo mwero wekubayiwa nhomba uchiramba uchiwedzera uye nyika yedu yatanga kuvhurika zvishoma nezvishoma zvakare, tinofara kuona kudzoka kwezviitiko zvemunhu. Krakow inopa nzvimbo yemusangano inokwanisika kunhengo zhinji dzeICCA uye guta iri pasina mubvunzo richaratidza zvakanakisa zvinopihwa neindasitiri yedu kumisangano yemasangano epasi rose, ”akadaro Gopinath.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 27